Gịnị mere ụgbọ okporo ígwè bụ The Best Way To Lee Italy | Save A Train
Home > Inzọ Njem Italytali > Gịnị mere ụgbọ okporo ígwè bụ The Best Way To Lee Italy
Ị nwere ibu nke nhọrọ mgbe ị na-ekpebi otú njem. Dị ka aha nke ama nkiri, ị nwere ike ịga via ụgbọ elu, ụgbọ oloko, na ụgbọala. Mgbe ọ na-abịa na-ewere a tour nke Italy, Otú ọ dị – there are some definite elele na-aga ụgbọ okporo ígwè.
Ụgbọ okporo ígwè Kasienụ
nwa ewu ụtọ a ụgbọ okporo ígwè
Airline oche bụ notoriously obere on legroom, na ị na-agaghị ekwe ka iji kọmputa ngwaọrụ n'oge takeoff na ọdịda. Nke a pụtara maka mkpumkpu flights, ị na-anọzi gị obere oche n'ihi na ọtụtụ ndị na ụgbọ elu na-enweghị ihe ndọpụ uche awa site smartphones na technology, nke a dị nnọọ iche na ụgbọ oloko.
Cars mgbe-enye a nta ọzọ ohere, ma ndị ịnyịnya nwere ike ịbụ bumpy na ụfọdụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ụgbọ ala ọrịa – karịsịa na a ogologo njem mgbe ị nwere ike chọrọ ịgụ ma ọ bụ egwu egwuregwu. ụgbọ okporo ígwè, n'akụkụ aka nke ọzọ, na-enye ala oche na a ezigbo ride – Iweputa site ogologo takeoff na ọdịda ugboro, ọzọ ahụmahụ dị iche site n'ụgbọ okporo ígwè.
Mgbe-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè na-agba ịnyịnya na Italy, i nwere ike na-agbalị nnọọ ala ergonomic oche na ụda na-proofed cabins nke ọhụrụ oke ọsọ Frecciarossa 1000 ụgbọ okporo.
Naples na Genoa Ụgbọ oloko
Turin na Genoa Ụgbọ oloko
Rimini na Genoa Ụgbọ oloko
Siena na Genoa Ụgbọ oloko
Ụgbọ okporo ígwè echiche
Air njem awade ikpọ efe n'elu echiche, ma nanị ruo nwa oge ruo mgbe ụgbọelu ọdọk n'ebe dị elu karịa ndị obodo. Mgbe Okporo ụzọ awara awara na-adịghị na-emekarị ọmarịcha, ụzọ n'etiti obodo nwere ike inye ọmarịcha echiche. Otú ọ dị, ndị ọkwọ ụgbọala uche n'okporo ụzọ, otú ahụ nanị ndị ọzọ nọ nwere ike iju na Rolling ugwu nta ma ọ bụ mara mma na oké osimiri. Ụgbọ okporo ígwè na-enye ohere niile njem na-enwe eke mara mma n'èzí windows.
Otu n'ime ihe ị na-anụ si ndị mmadụ gara Italy site okporo ígwè bụ otú ọmarịcha na ọ bụ ụgbọ okporo ígwè eme njem n'oge anyanwụ dara.
Train njem na Italy bụ karịsịa mara mma yabụ gbaa mbọ hụ na ị na -eme njem na Cinque Terra n'etiti Levanto na La Spezia ma ọ bụ a njem ala n'ebe ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri si Rimini ka Catania.
Messina na Palermo Ụgbọ oloko
Syracuse ka Palermo Ụgbọ oloko
Sicily ka Palermo Ụgbọ oloko
Ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọnụ karịa na-efe efe. Car mgbazinye nwere ike ịbụ na-eri-irè, ma mgbe ị na tinye insurance, gas, na oge (oge ịnya ụgbọ pụtara ihe ehihie na abalị nke ulo) gị na njem nwere ike inwe oké ọnụ ngwa ngwa. I nwekwara ike na-eji ụgbọ okporo ígwè, na ụzọ ị na-akwụ maka ulo na iga na otu.
Rimini ka La Spezia Ụgbọ oloko
La Spezia ka Levanto Ụgbọ oloko
anyanwụ dara oge n'elu ugwu
Ụgbọ oloko emit nnọọ ole na ole carbon anwuru karịa ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ ala. Dị ka otu nnyocha, ugbo ala emit okpukpu abụọ na ego nke CO2 ụgbọ oloko na-eme.
Ụgbọ elu-eme ka ndị kasị gburugburu ebe obibi mmetụta. Mgbe ị na-ahọrọ n'etiti efe efe ma ọ bụ na-ewere a ụgbọ okporo ígwè, atụle nke a: ụgbọ elu na-eji ọtụtụ ndị ha mmanụ ụgbọala maka takeoff na ọdịda. Ka a na-evens n'elu ogologo ogologo osisi flights, ọ pụtara a otutu ihe mmanụ ụgbọala kwa kilometa na-eji maka mkpumkpu flights, dị ka na-eme njem n'ime Italy.
Ke adianade na, na ọtụtụ ndị na-aga ọdụ ụgbọ ala ma ọ bụ taxi, agbakwunye ọzọ carbon umu anwuru na ha ngụkọta. Nke a pụtara na ọ na-eme ka ndị ọzọ na gburugburu ebe obibi uche na-na-intercity ụgbọ okporo ígwè karịa a obere ụgbọ elu ma ọ bụ a mbanye.
Wezụga petrol na dizel ojiji, mkpọtụ na ikuku ndu, nakwa dị ka mkpa na-adọba ụgbọala ụgbọala na obodo na-ama na-enweghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ oghere.
Ụgbọ okporo ígwè N'ENWEGHỊ
Mgbe ị na-egbu ihe ọghọm site na njem ndị njem, efe efe bụ ukwuu odi mfe karịa ịnya ụgbọ. Ebe a bụ ihe mere: e nwere ihe na-erughị ohere nke mmadụ njehie, ọ na-esikwara anyị ike ịghọ onye na-anya ụgbọelu karịa inweta onye nyere ya akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala. Buru n'uche ihe n'ụzọ na ọnọdụ na ike ọgwụgwụ na ogologo draịva, ọ dị mfe ịhụ ihe mere ị na-ahọrọ a ụgbọelu bụ odi mfe karịa a ụgbọ ala.
Tụnyere ụgbọ oloko, Otú ọ dị, ụgbọ elu na-adịghị ezi dị ka mma. Ụgbọ oloko njem tinyere track na iji nwayọọ gbapụrụ ọsọ, nke pụtara na e nwere obere ohere nke n'iyi tụnyere ụgbọ elu. N'ọnọdụ nke derailment, iji nwayọọ gbapụrụ ọsọ pụtara obere n'ihe ize ndụ.
Florence na Rimini Ụgbọ oloko
Rome ka Rimini Ụgbọ oloko
Milan ka Rimini Ụgbọ oloko
Venice na Rimini Ụgbọ oloko
Na nkezi freeway uzo akpali banyere 2,500 ndị mmadụ kwa hour – mgbe a typical ụgbọ okporo ígwè akara pụrụ ibu 50,000 ndị mmadụ kwa hour. Nke a na-eme ka ụgbọ okporo ígwè eme njem n'ụzọ ọsọ karịa ụgbọala, karịsịa mgbe ị na iburu n'uche na nwayọọ na-aga na okporo ụzọ, kwụsị n'okporo ámá, okporo ụzọ ọkụ na-apụghị izere ezere na-ezighị ezi ibe. Na n'elu nke, ndị ọkwọ ụgbọala na-elekwasị anya n'okporo ụzọ, ya mere, ha ga-enwe ike iji na-agụ, ọmụmụ, ụra, ma ọ bụ ọrụ.
Iberibe anya nwere ike ngwa ngwa karịa njem ụgbọ okporo ígwè, ma maka obere anya, ikuku njem anaghị zọpụta oge. First, mkpa ka ị ga-esi na ọdụ – mgbe nsogbu anya n'ebe residential ebe. Ị na-mkpa na-ahụ na ọ dịghị ihe ọzọ otu awa tupu gị takeoff oge na-elele na na na-aga site nche. Ọ bụrụ na ị elele ibu, ị ga-mkpa ichere ka ya na carousel. Ma nke ahụ bụ niile tupu ọ bụla ụgbọ elu na-egbu oge ma ọ bụ ije ma ọ bụ ụgbọ ala n'agbata ọdụ ọnụ na ọnụ ụzọ ámá.
anyanwụ na ụgbọ okporo ígwè
Ọdụ na-na nsogbu na mpụga nke obodo, nke pụtara mgbe ị na-ala, ị ka ga-mkpa iji ụgbọ ala, ụgbọ ala, ma ọ bụ zụọ n'ime obodo. Mgbe ọ na-abịa na-ahụ nlegharị anya, ụzọ na obodo emmepe nwere ike congested na siri ike iji nweta ụgbọala, ka ewere a ụgbọ okporo ígwè na-eme ka a otutu nke uche na mepere emepe.
-Achọ ịzụta ụgbọ okporo ígwè tiketi na-enweghị ntinye akwụkwọ ụgwọ? Gị SaveATrain.com to nweta ndị dị ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè udu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
environmentallyfriendly	longtrainjourneys	Train Travel	travelitaly